Pamwe chete yedu pamutemo drones tinogona kuita incredible maonero venyu chirongwa, chiitiko kana kugadzwa. Hazvinei nayo zvako muchato, chikepe kana chivakwa, kunyange zvemuchadenga nharaunda.
Photographers edu kuti mapikicha pamwe vanenge 4K chisarudzo uye zvakazara immersive 360. Ivo vakundi zvose basa ravo dzakawanda firimu uye mifananidzo mumakwikwi. Our 360 Photographers vari Google akavimba uye anokosha kodzero uye kuwana nzvimbo vakasarudzwa musha maguta avo zvakavanzika. Under kwomuzvarirwo ezvinhu mifananidzo yacho Uploads kutora nzvimbo yokutanga muna Google. Photographer nomumwe ane miriyoni maonero. Yours mabhizimisi anogona kutora nzvimbo yokutanga Google Maps chepamusoro chete nekusimba nzira uye mufananidzo yedu.
Legal Flight Rights & nyaya dzemapepa
nehurumende uye zviremera zvomunzvimbo anogona kuparadza zvose ndezvenyu kugadzirwa zvirongwa. Special kana pezvatinotaura Vols uye zvemuchadenga mifananidzo. In this example you see our Certificate of Identification of one of our registered drones in Romania. Hatina vemunzvimbo yakavakirwa dzaishandisa. bepa ichi kunoita ndimugure akafanana ndege uye kumhara rakaita ndege. Mumwe kubvisa zviri pamutemo vakanyorwa uye akawana mvumo. bepa iri haibvumiri kuti firimu kana mapikicha. Nokuti ichi kuvapo mitemo yakasiyana uye madhipatimendi ehurumende.
vachiri kwete anopesana. Zvirango hungada iwe 20000 Maeuro mutirongo. We kuronga nokuti imi muna Europe flightrights uye zviri pamutemo mapepa. Zviri Zvinogonekawo kuti kuisa iwe uye neyenyuwo opareta pane yatakanyora pasi, kuti iwe unogona kubhururuka drone the mano edu zviri pamutemo. muenzaniso uyu rinowanzoshandiswa TV nezvinobvamo mu yokukurumidzira nyaya kana vashanyi kuti vanoda kubereka vezvemutemo mifananidzo. isu Kumbira mukuvamba frontto kukurukura zvakanakisisa muenzaniso iwe.